Ngaphezulu kweminyaka engaphezu kweyesibini kwimbali, iUnited States ibone isabelo sayo seentsuku ezilungileyo nezimbi. Kodwa kubekho iintsuku ezimbalwa ezashiya amaMerika ukwesaba ikusasa lwesizwe kunye nezokhuseleko lwabo kunye nentlalo-ntle. Apha, ngokulandelana kwexesha, ziintsuku ezisibhozo zezona zinto ziyingozi kunazo zonke eMelika.
Ngo-Agasti 24, 1814: iWashington, DC iyatshiswa yiBrithani
Ngomnyaka we-1814, ngonyaka wesithathu weMfazwe ka-1812 , eNgilani, emva kokuzikhusela ukuhlasela kweFransi ngaphantsi kweNapoleon Bonaparte , wagxininisa amandla akhe amakhulu empi ngokubuyisela imimandla emikhulu ye-United States ekhuselekileyo.
Ngo-Agasti 24, 1814, emva kokulwa namaMerika kwiMfazwe yaseBladensburg , amabutho aseBrithani ahlasela iWashington, DC, ebeka umlilo kwizakhiwo ezininzi zikaRhulumente, kuquka iNdlu ye-White House. UMongameli uJames Madison kunye nolawulo lwakhe lwabaleka kuloo sixeko baza balala ubusuku eBrownville, eMaryland; eyaziwa namhlanje ngokuthi "i-United States Capital for Day."
Kwiminyaka engama-31 emva kokuphumelela ukuzimela kwabo kwiMfazwe yeSiguqulelo, amaMelika avuka ngomhla ka-Agasti 24, 1814, ukuze abone i-capital of their burning fire on the ground kwaye ihlala yiBritish. Ngomso olandelayo, iimvula ezinzima zibeka imililo.
Ukutshiswa kweWashington, ngoxa besabisa kunye neentloni kumaMerika, kwakhupha umkhosi wase-US ukuba ubuyele phambili phambili eBrithani. Ukuzaliswa kweSivumelwano saseGhen ngoFebruwari 17, 1815, iphelile iMfazwe ye-1812, igujwa ngabantu abaninzi baseMelika "yimfazwe yesibili yokuzimela."
Ngo-Apreli 14, 1865: UMongameli Abraham Lincoln wabulawa
Ukubulawa kukaMongameli uLincoln kwi-Theater yaseThekwini, ngo-Ephreli 14, 1865, njengoko kuboniswe kule mifanekiso ye-lithograph nguHH Lloyd & Co. Photo © Library of Congress
Emva kweminyaka emihlanu eyoyikisayo yeMfazwe yombango, amaMerika ayexhomekeke kuMongameli uAbraham Lincoln ukugcina uxolo, ukuphilisa amanxeba, nokubuyisela isizwe kwakhona. Ngomhla ka-Apreli 14, 1865, emva kweeveki emva kokuqala ikhefu lakhe lesibini kwi-ofisi, uMongameli uLincoln wabulawa ngumntu onesivumelankulu uMnumzana uJohn Wilkes Booth.
Ngombhobho owodwa, ukubuyiswa kokuthula kweMelika njengesizwe esinobumbano kubonakala ngathi sele kuphele. UAbraham Lincoln, umongameli owayevame ukuthetha ngamandla "ukuvumela amaRabheli ukuba alulake" emva kwemfazwe, wayebulewe. Njengoko i-Northerners ibiza abantu baseMantwini, bonke abantu baseMerika babesaba ukuba iMfazwe Yombango ingekhe iphele kwaye ukuba ukugqithiswa kobukhoboka obusemthethweni kusekho.
Ngo-Oktobha 29, 1929: NgoLwesibili uLundu, i-Stock Market Crash
Abasebenzi bakhukula izitrato ngethuba elilandela ukuhlaselwa kwemakethe yase-Black ngoLwesibili eWall Street, kwisixeko saseNew York, ngo-1929. I-Hulton Archives / i-Archive Photos / Getty Izithombe
Ukuphela kweMfazwe Yehlabathi I ngowe-1918 kwanyusa iUnited States kwixesha elingakaze lize liphumelele kwezoqoqosho. "Ukunyuka kwama-20" kwakuyixesha elihle; lungile, eqinisweni.
Nangona iidolophu zaseMelika zakhula kwaye ziphumelela ngokukhula ngokukhawuleza kwezentengiselwano, abalimi belizwe bafumana ukuphelelwa yithemba kwezezimali ngokubanzi ngenxa yokuvelisa izityalo. Ngexesha elifanayo, imarike yesitokhwe esingalawulwayo, kunye nobutyebi obugqithiseleyo kunye nemali esekelwe kwimpembelelo emva kwemfazwe, iholele iibhanki ezininzi kunye nabantu ngabanye ukwenza utyalo-mali obungozi.
Ngo-Oktobha 29, 1929, amaxesha amahle aphelile. Ngaloo "uLwesibili oMnyama" kusasa, amanani esitokisi, athengiswa ngamanga ngokutyalomali-mali, agxininiswe kwibhodi. Njengoko isabisa sisasazeka kwiWall Street ukuya kwisiGrato saseNtloko, phantse wonke amaMerika anesitokisi aqala ukuzama ukuzithengisa. Ewe, ekubeni wonke umntu uthengisa, akukho mntu wayithengayo kunye namaxabiso esitokisi aqhubeka ngokuwa kwamahhala.
Kulo lonke uhlanga, iibhanki ezazityala ngokungaqondanga kakuhle, ukuthatha amashishini kunye nokugcinwa kwentsapho nabo. Kwiintsuku ezimbalwa, izigidi zabantu baseMerika ezazizicinga "ngokucwangcisa" phambi koMnyama wesiBili bafumana ukuma bengenamsebenzi kunye nemigca yokutya.
Ekugqibeleni, ukuhlaselwa kweemarike ezinkulu ze-1929 kwabakho kwi- Depression Depression , iminyaka eyi-12 yobutlhaba kunye neengxaki zezoqoqosho eziya kugqitywa kuphela yimisebenzi emitsha eyenziwe kwiNkqubo entsha yeNtetho kaMongameli uFranklin D. Roosevelt kunye ne-industrial ramp up kwiMfazwe Yehlabathi II .
NgoDisemba 7, 1941: I-Pearl Harbor Attack
Umbono we-USS Shaw ukuqhuma kwi-US Naval Base, i-Pearl Harbor, eHawaii, emva kokuqhuma kwebhotile eJapan. (Ifoto nguLawrence Thornton / Getty Images)
NgoDisemba 1941, abantu baseMerika bajonge phambili kwiKrisimesi ekhuselekileyo ekukholweni ukuba imigaqo- karhulumente yexesha elide lokuzimelela kolunye uhlangothi lwaluya kulondoloza uhlanga lwazo ukuba lubandakanyeke kwimfazwe eyasasazeka kwiYurophu naseAsia. Kodwa ekupheleni kosuku ngomhla kaDisemba 7, 1941, babeyazazi ukuba inkolelo yabo yayingumntu ongekho.
Ekuseni ekuseni, uMongameli uFranklin D. Roosevelt ngokukhawuleza wabiza "umhla oza kuhlala uhlambalaza," amabutho aseJapan ahlasela ukuhlaselwa kwamabhomu ePaul Harbor, eHawaii. Ekupheleni kosuku, abasebenzi baseMelika abangu-2,345 nabahlali abangama-57 babulawe, kunye nabanye abasebenzi base-1 247 kunye nabantu abangama-35 balimala. Ukongezelela, i-US Pacific iinqwelo eziye zachithwa, kunye neenqwelo zokulwa ezine kunye nabatshabalali ababini bazama, kunye neenqwelo-moya ezili-188 zatshatyalaliswa.
Njengemifanekiso yokuhlaselwa kwamaphephancwadi kuwo wonke uhlanga ngoDisemba 8, amaMerika ayaqonda ukuba kunye neenqwelo zePacific zahlutha, ukuhlasela kweJapan kwi-Coast West yase-Japan kwaba yinto enokwenzeka ngokwenene. Njengoko uloyiko lokuhlaselwa kwelizwe lwakhula, uMongameli uRoosvelt wayala ukuba abantu abangama-117,000 baseMerika bavela kwiJapan . Njengaye okanye akunjalo, amaMerika ayazi ngokuqinisekileyo ukuba ayingxenye yeMfazwe Yehlabathi II.
Ngo-Oktobha 22, 1962: ICrisis of Missile Crisis
Icala elide elide laseMerika leNtsholongwane yeMfazwe yajika yecala ngokuhlwa ngo-Oktobha 22, 1962, xa uMongameli uJohan F. Kennedy ehamba kwiTV ukuze aqinisekise ukusola ukuba iSoviet Union yayifake imikhosi yenyukliya eCuba, iimitha ezili-90 ukusuka kummandla waseFlorida. Nabani na okhangela ukwenkqiswa kweHalloween okwenene kwakukho enkulu.
Ukwazi ukuba iimpazamo zazikwazi ukuhlasela iithagethi naphina kwilizwekazi lase-United States, uKennedy waxwayisa ukuba ukuqaliswa kwanoma yimuphi umkhosi we-nyukliya waseSoviet wawuza kuthatyathwa njengesenzo semfazwe "sidinga impendulo epheleleyo yokubuyisela kwi-Soviet Union."
Njengabantwana besikolo sase-Amerika babengafuni ukukhusela phantsi kweedesiki zabo ezincinci kwaye baxeliswa, "Musa ukukhangela i-flash," uKennedy kunye nabacebisi bakhe abasondeleyo benza umdlalo onobungozi kakhulu kwi- diplomacy ye- athomu kwimbali.
Ngoxa i- Cuban Missile Crisis iphelile ngoxolo kunye nokususwa kokuxoxwa kwee-missiles zaseSoviet ukusuka eCuba, ukwesaba kweArmagedon yenyukliya kudla namhlanje.
NgoNovemba 22, 1963: UJohn F. Kennedy wabulawa
Emva kweenyanga ezili-13 emva kokusombulula iCrisis of Missile Crisis, uMongameli uJohn F. Kennedy wabulawa ngoxa ekhwele kwi-motorcade yedolophu yaseDallas, eTexas.
Ukufa okubuhlungu komongameli omthandayo kunye nomsondlo othumayo wathuma ama-shockwaves eMelika nakwihlabathi jikelele. Ngethuba lokuqala kweyure emva kokudubula, ukwesaba kwaphakanyiswa ngeengxelo eziphosakeleyo ukuba i-Vice-President uLyndon Johnson , egibele iinqwelo ezimbini emva kweKennedy kwinqwelo efana nayo, nayo yadutshulwa.
Ngoxinzelelo lweNtsholongwane yeHlabathi eqhubeka isebenza kwi-fever pitch, abantu abaninzi babesaba ukuba ukubulawa kukaKennedy bekuyingxenye enkulu yokuhlaselwa kweentshaba e-United States. Le nkxalabo yanda, njengoko uphando lubonisa ukuba umsolwa u- Lee Harvey Oswald , owayengumnye wase-US Marine, wayelahlekile ukuba ngummi waseMelika waza wazama ukusilela kwiSoviet Union ngo-1959.
Imiphumo yokubulawa kukaKennedy iyaqhubeka ihlaziywa namhlanje. Njengoko kuhlaselwa kwePearl Harbour kunye noSeptemba 11, 2001, ukuhlaselwa kwesibetho, abantu baqhubeka bambuza, "Uphi na xa uvile malunga nokubulawa kukaKennedy?"
Ngo-Epreli 4, 1968: UDkt Martin Luther King, Jr. wabulawa
Njengokuba amazwi akhe anamandla kunye namaqhinga afana namakhwenkethi, ukuhlala, kunye neendlela zokubhikisha zazifudula zihamba phambili ngoxolo, uDkt Martin Luther King Jr wadutshulwa wabulawa yi-sniper eMemphis, eTennessee, ngo-Ephreli 4, 1968. .
Ngobusuku ngaphambi kokufa kwakhe, uDkt. King wayedlulisele intshumayelo yakhe yokugqibela, wayethetha ngokukhawuleza nangokwesiprofeto esithi, "Sineentsuku ezinzima ezizayo. Kodwa akwenzeki kwam ngoku, ngokuba ndiye kwintaba ... Wandivumela ukuba ndenyukele entabeni. Kwaye ndikhangele, kwaye ndiyibone iZwe Lesithembiso. Ndingaze ndifike khona nawe. Kodwa ndifuna ukuba wazi namhlanje namhlanje ukuba thina, njengabantu, siya kufumana kwilizwe elithembisiweyo. "
Kwiintsuku ezimbalwa zeNobel Peace Prize ukubulawa kwabantu, i-Civil Rights Movement yaphuma ekungabikho kobundlobongela kugazini, iqhutywe yimivimbo kunye nokubetha, ukugwetywa okungekho sikweni, kunye nokubulawa kwabasebenzi bamalungelo oluntu.
Ngomhla ka-Juni 8, osolwa ngokubulala uJames James Earl Ray wabanjwa e-London, eNgilani, kwisikhumulo sezindiza. URay kamva wavuma ukuba wayezama ukufikelela eRhodesia. Ngoku ibizwa ngokuba yiZimbabwe, ilizwe lalo xesha lilawulwa ngumbutho ojongene nobandlululo olwaphulo-mthetho olwahlukileyo oMzantsi Afrika . Iinkcukacha ezityhilelwe ngexesha lophando zakhokelela abaninzi abantu baseMelika baseMelika ukuba banomdla wokuba uRay ube ngumdlali kwimfihlelo yaseburhulumenteni yaseburhulumenteni yaseburhulumenteni yase-US.
Ukuthululwa kwentlungu nomsindo owalandela ukufa kukaKumkani kwagxila eMelika ngokulwa nokulwa nokucwaswa kunye nokukhawulelana nomgaqo obalulekileyo wemigangatho yoluntu, kubandakanywa noMthetho weZindlu zoLuntu ka-1968, owenziwe njengenxalenye yeNkulumbuso enkulu yoMongameli uLyndon B. Johnson .
NgoSeptemba 11, 2001: Ukuhlaselwa kweSigqeba 11 seSigqeba
I-Twin Towers Aflame ngoSeptemba 11, 2001. Ifoto nguCarmen Taylor / WireImage / Getty Izithombe (ihlanjwe)
Ngaphambi kolu suku olwesabisayo, abaninzi baseMerika babona ubugrogasi njengengxaki eMbindi-mpuma kwaye banethemba lokuba, njengakwixesha elidlulileyo, ulwandle olubanzi nolwandle olunamandla luya kugcina i-United States ikhuselekile ekuhlaselweni okanye ekuhlaselweni.
Ngomso kaSeptemba 11, 2001 , loo ntembelo yachithwa ngonaphakade xa amalungu eqela lamaSilamsi e-al-Qaeda aphanga iinqwelo ezine zeevenkile zentengiso kwaye azisebenzisa ukubulala ukuhlasela kwamaphekula e-United States. Izibini ezimbini zazingena zatshatyalaliswa zombini izibonda ze-World Trade Centre kwisixeko saseNew York, indiza yesithathu yabetha i-Pentagon kufuphi neWashington, DC, kunye neyesine, yaphazamisa intsimi ngaphandle kwePittsburgh. Ekupheleni kosuku, izigulane ezingama-19 zabulala abantu abangaba-3 000, zalimala ngaphezu kwe-6,000, kwaye zenza ngaphezu kweebhiliyoni ezili-10 kumonakalo wepropati.
Ukoyika ukuba ukuhlaselwa okufanayo kwakusondele, i-US Federal Aviation Administration ivimbele zonke iinkonzo zokurhweba kunye nezangasese ukuze kufikelelwe amanyathelo okukhusela okukhuselekileyo kwiindawo zezindiza zase-US. Kwiiveki, abantu baseMerika bekhangela ukwesaba nanini na i-jet ihamba ngeenxa zonke, njengoko iiplani kuphela ezivunyelwe emoyeni ziyizindiza zempi.
Ukuhlaselwa kwabangela iMfazwe kwiNyikima, kubandakanya iimfazwe ezilwa namaqela amaphekula kunye nokwesabisa-urhulumenteni kwi- Afghanistan nase- Iraq .
Ekugqibeleni, ukuhlaselwa kwabakwaMelika ngesisombululo esifanelekileyo sokwamkela imithetho, njengomthetho we- Patriot Act ka-2001 , kunye nokunyanzeliswa okuqinileyo kunye nakokuninzi okukhuselekileyo, okwenzela inkululeko yokubuyisa uluntu.
NgoNovemba 10, 2001, uMongameli uGeorge W. Bush , ebhekiselele kwiNdibano Yonke yeZizwe eziManyeneyo, wathi ngokuhlasela, "Ixesha lidlulayo. Sekunjalo, kwiUnited States of America, akuyi kubakhohlwa iSeptemba ngomhla we-11. Siza kukhumbuza wonke umhlanguli owafa ngenhlonipho. Siyakhumbula yonke intsapho ehlala ebudeni. Siyakhumbula umlilo kunye nomlotha, iifowuni zokugqibela, imingcwabo yabantwana. "
Ekubeni iziganeko ezitshintsha ngokwenene ubomi, ukuhlaselwa kukaSeptemba 11 kujoyina ukuhlaselwa kwePearl Harbour kunye nokubulawa kukaKennedy njengeentsuku ezikhuthaza abantu baseMerika ukuba babuzane, "Uphi wena xa ...?"
I-Homestead Steel Strike
I-Hartford Convention yaphakanyiswa utshintsho kuMgaqo-siseko ngo-1815
Imbali Yobungqina BamaRashiya
Umlando weSt. Valentine's Day kwi-1800s
Imbali ye-US Federal Budget Deficit
Izitereferensi kunye nee-Stereoscopes
I-Coxey Army: 1894 Matshi wabasebenzi abangaqeshwanga
Iingingqi ze-Early American Colonial
I-Lafayette Yokubuyisela eMelika
Ukusayina iNcwadi kaMtyholi
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseMakin
Indlela yokuthengisa ngeentombi zeBeanie
Isikhokelo se-Eco-Friendly Car Washing
Homo Erectus (okanye H. heidelbergensis) Iikholeji eYurophu
Iimifanekiso ezi-7 ze-Classic Classic ezihamba noGrace Kelly
Abamkelekileyo kwiKholeji yamaKristu
Indlela Yokubika Umntwana Ngamanyala
Iintetho zamaSuku kaFelverine: Iindaba ezilula zeziBili
Iingcaphuno malunga neKholeji
Umthandazo Wokukhuselwa Kwekululeko Yenkolo
AmaSikh Baby Names Ukuqala ngeS
I-Panth: Indlela yoMoya yeSkh Society
Indlela yokugcina idatha yeRekhodi kwi-BLOB Field eDelphi
Yintoni Eyenzeka Ngethuba Elikufuphi Lokufa? (NDE)?
Amahlaya okufudumala kwihlabathi
IYunivesithi yase-Ohio i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT
'IsiXhosa seMad Men' 1 Isiqendu
Ukusebenzisa iSixanish 'Y'